May 2017 - Sawirrotv
Gaarigii Boosaaso Lagu Qabtay (VIDEO)
Gaariga ay ciidamada Puntland qabteen oo ahaa nuuca xamuulka qaada ayaa waxaa saarnaa waxyaabaha qarxa oo kala duwan, gaarigan ayaa waxaa saarnaa Isgaarsiinta casriga ee ay ciidamada kuwada hadlaan, dareeska ciida ay xirtaan iyo taargooyinka laga isticmaalo maamulada Somaliland iyo Puntland. Magaalada Boosaaso ayaa waxaa sidan oo kale dhawaan loogu qabtay gaari kale oo waxyaabaha …
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta Gaaray Magaalada Cadaado ee Gobolka Gobolka Galgaduud (SAWIRRO)
Madaxweynaha jahuuriyadda Soomaaliya mudane, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo xubno kale oo katirsan dowladda Federaalka ayaa maanta gaaray magaalada Cadaado ee xarunta KMG ee maamulka Galmudug. Madaxweyne Farmaajo iyo xubnaha la socday ayaa loo galbiyay xarunta Madaxtooyada maamulka Galmudug halkaasi oo ay ka socoto munaasabada caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf. Munaasabada Caleemo …
Dagax Dhigii Wadada Sodonka (VIDEO)
Ammaanka goobtaasi ayaa si aad ah loo adkeeyay, iyadoona la xiray guud ahaan dhaq dhaqaaqa wadada wadnaha, Maka Al-Mukaram iyo Wadada Sodonka oo maanta Ra’iisal Wasaarahu uu dhagax dhigay. Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa isagana dhankiisa sheegay Maamulka Gobolka inuu ka shaqeynayo soo saarista bilicdii ay lahaan jirtay Magaalada Muqdisho, taasina lagu gaaraayo guud ahaan Bulshada …
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo Maanta Kulan Xasaasi la Qaatay Beesha Caalamka (SAWIRRO)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta kulan gaar ah la qaatay Beesha Caalamka oo ujeedadiisu ahaa inuu warbixin ka siiyo xaaladda dalka, isla markaana uu ka codsaday in labada dhinacba ay la yimaadaan isla xisaabtan dhab ah oo dhameystiran. Kulankan ayaa waxaa goob joog ka ahaa Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee …
Maamulka Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in Dowlada Imaaraatka Carabta ay weeraro ka qaadi karto saldhiga laga siiyay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Berbera, waxaana la filayaa in saldhigaasi dhawaan la howlgaliyo. Saraakiil katirsan Maamulka Somaliland ayaa laga soo xigtay in Diyaaradaha dagaalka dowlada Imaaraatka Carabta ay dhawaan si deg deg ah uga duuli doonaan garoonka …
Weerarada Imaaraadka & Dekedda Berbera (VIDEO)
Saraakiil katirsan Maamulka Somaliland ayaa laga soo xigtay in Diyaaradaha dagaalka dowlada Imaaraatka Carabta ay dhawaan si deg deg ah uga duuli doonaan garoonka Diyaaradaha Berbera, waxaana diyaaradahaasi ay fulin karaan duqeymo iyo weeraro kale. Maamulka Somaliland ayaa kula heshiiyay dowlada Imaaraatka Carabta in saldhig Milatari ka furtaan Garoonka Berbera, waxaana Somaliland dhankeeda lagu abaal …
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dalka Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar ayaa maqaal dheer ka qoray safarada isdfabajooga ah ee Madaxweynaha Soomaaliya mudane, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dalka uga baxay tan iyo markii la doortay. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa intii uu olalaha doorashada ku jiray ku dhaliilay Madaxdii isaga ka horeesay in dalka mar walbo uga bixi jireen safaro badan aan …